IPirates enkingeni yokulimala kwabadlaliIPirates enkingeni yokulimala kwabadlali - Ilanga News
Home Ezemidlalo IPirates enkingeni yokulimala kwabadlaliIPirates enkingeni yokulimala kwabadlali
Usehlolwa isimo sempilo kwiBucs umgadli waseGhana
UBAMBE umoya ngoThembinkosi Lorch umqeqeshi wePirates. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
IBAMBE umoya i-Orlando Pirates ngabadlali bayo okuvela ukuthi babe nokuthika-mezeka ejimini ngaphambi komdlalo obucayi nomkhaya iSwallows FC we-quarter final yeMTN8 ngoMgqibelo ngo-18h00 e-Orlando Stadium, eSoweto.
Lo mdlalo ubhekwe ngabomvu ngabathandi bakanobhutshuzwa-yo kwazise ngowomkhaya abadala baseSoweto. Nokho okubhekwe kakhulu wukuthi iBucs izowuqala kanjani umgqigqo wayo wokuvikela lesi sicoco njengoba iyizingqwe-le.
UJosef Zinnbauer ololonga iBucs, uveze ukuthi umincile nga-badlali bakhe abamqoka njengoba eya kulo mdlalo.
“Amalungiselelo ethu okuqala kwesizini entsha ahambe kahle kakhulu. Sibe nemidlalo yesihle, sakwazi ukubona abadlali esibasayinisile ukuthi basiphatheleni.
“Kodwa-ke sishayekile kancane njengoba uThembinkosi Lorch eke waba nenkinga yehlombe okwenze wangajima ngoLwesibili.
“Ngethemba ukuthi uzobe ese-wulungele lo mdlalo. Kwazoba nguRichard Ofori oke walimala ehlweni ejimini naye esibambe umoya ngaye. UTebogo Tlolane uke wahlatshwa wukugula kodwa ubuyile, yikhona nje ukuthi sisamuzama kancane. UZakhele Lepasa uneshwa akapholi, kufanele si-mnike isikhathi. Usazohlala izi-nyanga engadlali kanti uTshegofatso Mabasa uyeza kancane, uya-thembisa,” kusho uZinnbauer.
Uthi ubona ingozi kwiSwallows njengoba ifana nencwadi evaliwe kubona.
“ISwallows esiyodlala nayo ihluke kakhulu kunalena esidlale nayo ngesizini eyedlule. Ihanje-lwe yinqwaba yabadlali abaseqo-phelweni eliphezulu yaphinde ya-landa abanye abasezingeni eli-phezulu. Kunzima ukuqagula ukuthi izoqala ngobani, ifana nencwadi evalekile kithina.
“Kodwa-ke siyakwazi okufanele sikwenze kulo mdlalo. Ngethemba ukuthi sizowunqoba. Siwunqobile lo mqhudelwano ngesizini edlule nakulokhu sizozama ukuvikela isicoco sethu,” kusho uZinnbauer.
Ebuzwa ukuthi ngabe uyamsayi-nisa yini uKwame Peprah ongu-mgadli waseGhana obedlala kwi-King Faisal Babes FC, obejima neBucs, uthe ugcine esayohlolwa isimo sempilo ubengajimi. Nokho lokho kukubeka ngokusobala ukuthi iBucs ingase imsayinise.
Isiyonke imidlalo yama-quarter final eMTN8 ezogijinywa ngempelasonto iqhathwe kanje:-
EPrincess Magogo Stadium: Golden Arrows vs SuperSport Utd 15h00.
E-Orlando Stadium: Orlando Pirates vs Swallows 18h00.
ELucas Masterpieces Moripe Stadium: Sundowns vs Kaizer Chiefs 15h00.
EMoses Mabhida Stadium: AmaZulu vs CT City 18h00.
Previous articleBafuna lihlehliswe icala likaZuma
Next articleIsasasa ngomdlalo wamaciko webhola